अनुहारमा कागती लगाउनुका फाइदा र बेफाईदाहरु । - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 11:07
कागती धेरै गुणहरुले भरिपुर्ण फल हो। कागती खानामा मात्र प्रयोग हुँदैन यसका साथै धेरै रोगहरू निको पार्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा कागतीको प्रयोगले वइलि छालाको समस्या हटाउँदछ र छाला सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। अनुहारको चाँयाँ, चिलाउँने, आदि समस्या कम गर्न कागतीलाई धेरै फाइदाजनक मानिन्छ।
सकारात्मक नतीजाहरू प्राप्त भएपछि मात्र तपाईहरु विश्वास गर्नुहुनेछ र तपाई निश्चित रूपले कागती प्रयोग गर्ने सुझाव बारे जानकारी पाउँन उत्सुक हुनुहुनेछ। यस लेखमा हामी तपाईंलाई अनुहारमा कागती लगाउनुका फाइदाहरू र बेफाइदाहरुको बारेमा बताउँदैछौं।
अनुहारमा कागती लगाउँदा हुने फाइदाहरू,
१. अनुहारमा कागतीको लेप लगाउँदा वइलि छालाबाट मुत्त र आराम मिल्छ।
अनुहारमा कागतीको प्रयोगले छालालाई वइलि बनाउँदैन। छालामा सेबमको अधिक उत्पादनको कारण, छाला वइलि हुन्छ र कागतीले वइलि छालासँग लड्न मद्दत गर्दछ। कागतीमा एस्ट्रिजेन्टहरू हुन्छन जसले अनुहारलाई वइलि बन्न दिदैन। कागतीको प्रयोग गर्दा यसले छालाको प्वालहरू मा गइ छालालाइ सुक्खा बनाउदछ र छाला नरम साथै वइलि हुदैन।
यसको लागी हामीले आधा चम्चा कागतीनिचोडेर फेसमा लगाउने र राम्रो सँग मसाज गर्ने त्यसपछि सुक्खा हुन दिने र तातो पानीले पखाल्नु पर्दछ। यसरी हप्तामा एक पटक लगाउँदै जादा वइलि छालाबाट मुत्त भइन्छ। राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न तपाईं कागतीको प्रयोग गरीएको फेस वाश समेत लगाउँन सक्नुहुन्छ।
२. छालाको निखारपना एवंम चम्किलो छालाको लागि अनुहारमा कागती लगाउँनुहोस।
कागतीमा प्राकृतिक एस्ट्रिजेन्टहरू हुन्छ, जसले अनुहारमा निखारपना साथै गोरो बनाउन मद्दत गर्दछ। जब तपाईं कागतीको रस प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले छालालाई सुक्खा बनाउँदछ र छाला कडा हुन थाल्छ। लिम्बूको प्रयोगले सेवमको उत्पादन पनि सन्तुलित हुन्छ, छाला वइलि हुँदैन,बल्याक हेड, ह्वाइट हेड आदि अनुहारको समस्या पनि हटाउन सकिन्छ।
यसको लागी तपाइले एउटा स्प्रे बोतल मा १ चम्चा जति कागतीलाइ आधा गिलास पानीमा घोलेर फेसमा स्प्रे गर्ने यसरी एक हप्ता सम्म लगाउदा छालामा निखारपना बढ्नुका साथै छाला चम्किलो हुदै जान्छ।
३. कागतीले ब्ल्याकहेडहरू हटाउँन मद्दत गर्दछ।
ब्ल्याकहेड्स छालाका छिद्रहरूमा चिल्लो, अशुद्धता र ब्याक्टेरियाको कारण उत्पन्न हुन्छ। स्टीमको सहयोगले तपाईं अशुद्धताहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। साथै आधा भागमा एक कागती काट्नुहोस र यसलाई प्रभावित ठाउँमा रगडनुहोस त्यसपछि अनुहार धुनुहोस र बरफको टुक्राले बिस्तारै रगडनुहोस। हप्तामा एक पटक यो विधि दोहोर्याउनुहोस र अनुहारलाई नरम र ब्ल्याकहेड्सबाट मुक्त बनाउनुहोस।
४. अनुहारमा कागतीको प्रयोगले अनुहारमा पिगमेन्टको समस्या हटाउछ।
सिट्रस फलफुलहरू, विशेष गरी निम्बु,कालो दाग, छाला चाउरि र विभिन्न दागको समस्याको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईंले प्रभावित क्षेत्रमा कागतीको रस लगाउनु भयो भने यसले कालो दाग र पिग्मेन्टेशनको समस्या बिस्तारै हटाउदछ। कागतीमा रहेको सिट्रिक एसिडले अनुहार सफा राख्न मद्दत गर्दछ।
५. अनुहारमा कागतीको लेप लगाउँदा बुढोपना वा चाउरिपन को समस्या हटाइदिन्छ।
छालालाइ चम्किलो बनाउन भिटामिन सी एकदमै पूरक मानिन्छ। चाउरिपन कम गर्नको लागी निम्बुको रस र मह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै दालचिनी, जायफल पाउडर, जैतूनको तेल पनि प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। जायफलको पाउडरले रत्त प्रवाहलाई सुधार गर्दछ र निम्बुको रसले छालालाई चम्किलो बनाउँदछ।
यसको लागी एक चम्चा निम्बुको रस सँग एक चम्चा मह र एक चुत्की दालचिनी मिश्रण गरि लगाउने र १ मिनेट पछि पखाल्ने, यसरी यो प्रकृया १ हप्ता सम्म गर्नुहोस। छालामा बिस्तारै चमक आउँन थाल्छ।
अनुहारमा कागती लगाउदा हुने बेफाइदाहरु।
१. कागती प्रयोग गर्नाले छालाको पि एच स्तर परिवर्तन हुन्छ।
कागतीको रसमा एसिडको उच्च मात्रा हुन्छ। छालामा कागतीप्रयोग गर्नाले छालाको सुरक्षात्मक तहमा स्थायी क्षति हुन सक्छ किनकि यसले छालाको पीएच स्तर परिवर्तन गर्दछ। यसले हाइपरपिग्मेन्टेसन, चिलाउने, र छालालाई धेरै संवेदनशील बनाउन सक्छ।
२. दाग र मार्कहरू वा निशानहरु बस्न सक्छ।
कागतीमा धेरै एसिड हुन्छ, यदि तपाईंले पिम्पल्समा प्रयोग गर्नुभयो भने, तिनीहरूबाट रगत आउन सक्छ। यद्यपि नीम्बुले घाउ हरूसँग लड्न मद्दत र्पुयाउँछ, तर रक्तस्रावले तपाइँको छालामा दागहरू निम्त्याउन सक्छ।
३. निम्बुको रसायनले छाला डढ्न सक्छ।
तपाईंले अनुहारमा कागतीको रस लगाएपछि, यदि तपाईं बाहिर वा घाममा बस्नुभयो भने, घामको किरणले फाइटोटोफोडर्माइटिस निम्त्याउन सक्छ। कागतीमा रहेको सिट्रस एसिडले तपाईंको छालालाई सूर्यमा बढी संवेदनशील बनाउन सक्छ।
४. छालामा जलन हुन सक्छ।
जसको छाला संवेदनशील छ, उनिहरुले कागती प्रयोग गर्दा छाला जलेको महसुस हुन सक्छ र छाला चिलाउँन पनि सक्छ। यसले छालालाई रातो पार्न सक्दछ जसले गर्दा अनुहारमा निशानहरू सुरु हुन्छ र अन्य स्किन सम्बन्धी समस्याहरू सुरु हुन सक्छ।